दुधलाई कुन समयमा पिउदा फाइदा हुन्छ, यसलाई कसरी पिउने ? - ज्ञानविज्ञान
पेटमा ग्यासको समस्या भारतका आयुर्वेदाचार्य डा. सरोज पाण्डेका अनुसार केरा र दूध दुवै पौष्टिक खाद्य पदार्थ हुन्, तर, दुृवै खाँदाको समय २० मिनेटको फरकमा खानु पर्छ । अन्यथा यसले पेटमा ग्याष्ट्रीकको समस्या उत्पन्न गराउन सक्छ । शरीरमा विषाक्त पदार्थको उत्पन्न हुन्छ आयुर्वेदका अनुसार कुनै पनि ठोस फलको कुनैपनि तरल पदार्थमा समायोजन हुनुलाई राम्रो हुँदैन ।
Don't Miss it गिजाकाे समस्या देखी छाती दुख्ने समस्या सम्म राहात मिल्छ ल्वाङ चिया पिउनुदा, जानिराखाैँ
Up Next दाँतमा किरा लागेर हैरान हुनु भएकाे छ भने, दाँतको किरा मार्ने अचुक घरेलु उपाय
10 months ago sam dahal